ESRI Venezuela na Edgar Díaz Villarroel maka mbipụta Twingeo 6th - Geofumadas
ESRI Venezuela na Edgar Díaz Villarroel maka mbipụta 6 nke Twingeo
Mee, 2021 ọtụtụ
Iji malite, ajụjụ dị mfe. Gịnị bụ ọgụgụ isi ebe?
A na-enweta ọgụgụ isi ọnọdụ (LI) site na nyocha na nyocha nke data geospatial iji mee ka nghọta, ihe ọmụma, mkpebi na amụma. Site na itinye data, dịka ọnụọgụgụ mmadụ, okporo ụzọ, na ihu igwe, na maapụ dị mma, ụlọ ọrụ na-enweta ọgụgụ isi ebe ha ghọtara ihe mere ihe ji eme ebe ha mere. Dịka akụkụ nke mgbanwe dijitalụ, ọtụtụ òtù na-adabere na teknụzụ ihe ọmụma banyere ala (GIS) iji mepụta Ebe ọgụgụ isi.
Dịka ị hụla ebe nnabata nke ọgụgụ isi obodo na obere ụlọ ọrụ, yana nnabata ya na ọkwa Steeti / Ọchịchị. Nkuchi nke ọgụgụ isi ebe na nnukwu ụlọ ọrụ dị ezigbo mma, nke so mee ka mkpokọta nke GIS na ojiji nke ndị na-abụghị ọrụ ọdịnala, maka anyị ọ bụ ihe ịtụnanya etu anyị si arụ ọrụ na ndị ọrụ akụ, ndị injinia ụlọ ọrụ, ndị dọkịta, wdg. Ndị ọrụ na-abụghị ihe mgbaru ọsọ anyị dị ka ndị ọrụ na mbụ. Na Steeti / Ọchịchị n’ihi ọgbaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na enweghị itinye ego ebe a enwebeghị nnabata dị ezigbo mma.
Think chere na n'oge oria a na-efe ugbu a, ojiji, oriri na mmuta nke geotechnologies nwere mgbanwe dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma?
Geotechnologies nwere ọrụ dị mma na nke dị mkpa n'ọgụ a na-alụso nje ahụ, e mepụtara ọtụtụ puku ngwa n'ọtụtụ mba iji nyere aka, nyochaa ma mee mkpebi kacha mma. Enwere ngwa dị ka nke sitere na Mahadum Johns Hopkins University nke taa nwere nleta 3 ijeri. Dashboard Venezuela na JHU
Esri malitere COVID GIS Hub, teknụzụ a ọ nwere ike inye aka buso ọrịa ndị ọzọ ọgụ n'ọdịnihu?
ArcGIS HUB bụ ụlọ ọrụ enyemaka pụrụ iche iji chọta ngwa niile n'otu ebe ma budata data maka nyocha ndụ, n'oge a enwere ihe mkpuchi COVID maka Mba ọ bụla.nyere aka na ọrịa ndị ọzọ, ebe ọ ga-enwe ozi emeghe maka sayensị niile. na obodo ogwu na onye obula nwere mmasi inyere aka.
You chere na ojiji nke geotechnologies na-eto eto bụ ihe ịma aka ma ọ bụ ohere?
Ọ bụ ohere na-enweghị mgbagha ọ bụla, iji tụlee ozi niile, ọ na-enye ohere nyocha nke ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma na ọgụgụ isi na nke a ga-adị ezigbo mkpa na eziokwu ọhụrụ a.
You na-atụle na enwere nnukwu ọdịiche na ijikọ teknụzụ nke mbara igwe na Venezuela n'ihe metụtara ụwa ndị ọzọ? Ọgba aghara a ugbu a emetụtala mmejuputa ma ọ bụ mmepe nke geotechnologies?
Obi abụọ adịghị ya na enwere ihe dị iche n'ihi nsogbu a dị ugbu a, enweghị ego na ụlọ ọrụ gọọmentị nwere mmetụta na-emebi ihe, dịka ọmụmaatụ na ọrụ ọha na eze (Mmiri, Eletrik, Gas, Telephony, Internet, wdg) ha si na steeti ha enweghị teknụzụ geospatial na ụbọchị ọ bụla nke igbu oge nke na-agafe n'emeghị mmejuputa ndị a nsogbu na-agbakọta na ọrụ anaghị eme ma ọ bụrụ na ọ naghị aka njọ, n'aka nke ọzọ ụlọ ọrụ nzuzo, (nkesa nri, ekwentị, Mmụta, Azụmaahịa, Banks) , Security, wdg) ha na-eji teknụzụ nke ụwa arụ ọrụ nke ọma ma gị na mmadụ niile nọrọ.
Gịnị kpatara ESRI ji aga n'ihu na nzọ na Venezuela? Kedu njikọ aka ma ọ bụ mmekorita ị nwere na ndị ga-abịa?
Anyị Esri Venezuela, anyị bụ onye nkesa mbụ Esri na mpụga United States, anyị nwere ọdịnala dị ukwuu na mba ahụ, anyị na-arụ ọrụ ndị bụ ihe atụ maka ụwa ndị ọzọ, anyị nwere nnukwu obodo nke ndị ọrụ na-agụta mgbe niile na anyị na ntinye aka na ha na-akpali anyị. Na Esri anyị ji n'aka na anyị ga-aga n'ihu ịkụ nzọ na Venezuela nakwa na iji GIS bụ ihe ga-enyere aka iwulite ọdịnihu ka mma.
Banyere njikọ aka na imekọ ihe ọnụ, anyị nwere mmemme siri ike nke ndị mmekọ azụmaahịa na mba ahụ, nke mere ka anyị rụọ ọrụ n'ahịa niile, anyị na-aga n'ihu na-achọ ndị mmekọ ọhụrụ na mpaghara ndị ọzọ ọkachamara. N'oge na-adịbeghị anya ha mere "Nzukọ Ọgbakọ Smart na Teknụzụ". Co nwere ike ịgwa anyị ihe bụ Smart City, ọ bụ otu ihe ahụ dị ka obodo dijitalụ? Kedu ihe ị chere Caracas ga - efu - dịka ọmụmaatụ - ịghọ Smart City
Obodo Smart bụ obodo dị oke mma, ọ na-ezo aka n'ụdị mmepe obodo mepere emepe na-adabere na mmepe mmepe nke nwere ike ịzaghachi mkpa nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na ndị bi na ya, ma na akụ na ụba, dịka ọ na-arụ ọrụ, na-elekọta mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ọ bụghị otu ihe ahụ na obodo Digital bụ mmalite nke Digital City, ọ bụ nzọụkwụ ọzọ, Caracas bụ Obodo nwere 5 mayors nke ndị a enwere 4 ndị nọworị ụzọ ịbụ Smart City anyị gara n'ihu duzie ha na Atụmatụ, agagharị, nyocha na njikwa nke data yana nke kachasị mkpa na njikọta ya na ụmụ amaala. ArcGIS Hub Venezuela
Kedu, dabere na njirisi gị, bụ geotechnologies dị mkpa iji nweta ngbanwe dijitalụ nke obodo? Kedu uru ndị teknụzụ ESRI na-enye iji mezuo nke a?
Maka m, ihe dị mkpa iji nweta ngbanwe dijitalụ bụ ịnweta ndekọ dijitalụ ma dị na ebe ọ bụla, oge na ngwaọrụ, na ndekọ a, a ga-ebulite ozi niile dị mkpa na ationgbọ njem, Mpụ, Mkpebi Mkpa, akụ na ụba, ahụike, atụmatụ, Ihe omume, wdg. A ga-ekerịta ozi a na ụmụ amaala ma ha ga-adị oke egwu ma ọ bụrụ na ọ bughi n’oge ma bụrụ ezigbo mma. Nke ahụ ga - enyere aka ịme mkpebi n'oge ma dozie nsogbu obodo. Anyị na Esri nwere ngwaọrụ a kapịrị ọnụ na nke ọ bụla iji nweta ihe mgbaru ọsọ nke mgbanwe dijitalụ.
Na mgbanwe mgbanwe nke 4 nke ụlọ ọrụ a, nke na-eweta ebumnuche nke ịmepụta njikọ zuru oke n'etiti obodo (Smart City), ịmebe ihe owuwu (Digital Twins) n'etiti ihe ndị ọzọ, kedu ka GIS si abanye dị ka ngwa njikwa data dị ike? Ọtụtụ na-eche na BIM kacha adabara maka usoro metụtara nke a.
Ezigbo Esri na Autodesk ekpebiela ịmekọrịta iji mee ka nke a bụrụ eziokwu GIS na BIM dabara nke ọma n'oge a, anyị nwere njikọ anyị na njikọ BIM ọkpụkpụ na ozi niile nwere ike ịdọnye na ngwa anyị, ihe ndị ọrụ tụrụ anya bụ eziokwu inwe ihe omuma na nyocha nile n’otu ebe gha ekwe omume ta ArcGIS.
Ọ dị gị ka ESRI abịarutela njikọta GIS + BIM nke ọma?
Ee, ọ dị m ka ụbọchị ọ bụla yana njikọta ọhụụ n'etiti teknụzụ, ọ na-eju anyị anya n'ụzọ dị oke mma site na nyocha ndị enwere ike ịme. Dị ka ị hụworo na mmalite banyere iji ihe mmetụta maka ijide data data. Anyị maara na ekwentị mkpanaaka na-eziga ozi mgbe niile metụtara ọnọdụ. Kedu ihe dị mkpa nke data anyị onwe anyị na-ewepụta, ọ bụ mma agha ihu abụọ?
Ihe omuma nile nke ihe ndia n’eme bu ihe nmasi nma, nke n’eme ka ayi nyochaa otutu ihe omuma banyere ike, njem, nchikota ndi mmadu, ihe omuma nke ndi mmadu, ihe omuma ndi ozo, wdg. Obi abụọ adịghị ya ma ọ bụrụ na ejiri ozi a ezighi ezi ọ nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ, mana n'ezie enwere ọtụtụ elele maka obodo ahụ ma mee ka ọ dịrị ndị niile bi na ya mfe.
A na-eduzi usoro na usoro nke nnweta data na ijide data ugbu a iji nweta ozi na ezigbo oge, na-etinye n'ọrụ nke ihe mmetụta dị omimi dị ka drones, nke o kwenyere na ọ nwere ike ime na iji ihe mmetụta dị ka satellites optical na radar, na-achọpụta na ihe omuma adighi ozugbo.
Ozi oge bu ihe ndi oru nile choro na ihe obula nke obula bu ihe obula nke mmadu choro iju ya, drones enyerela otutu aka ime ka oge ndia di nkpari ma anyi nwere ihe di nma maka imelite ihe osise na usoro nke elu, ma drones ka nwere ụfọdụ ụgbọ elu na-agaghị emeli ụgbọ elu na ndị ọzọ ọrụaka mbipụta na-eme ka Satellites na Rada ka ezi nhọrọ maka ụfọdụ ụdị ọrụ. Ngwakọ n'etiti teknụzụ abụọ ahụ dị mma. Ugbua enwere ugbua oru n’eme ka satellites di ala di elu iji nyochaa uwa n’oge site na iji amamihe nke aka. Nke na egosi na satellites nwere ogologo oge iji.
Kedu usoro teknụzụ metụtara ọnọdụ ụwa na-eji nnukwu obodo eme ihe ugbu a? Kedu otu na ebee ka omume kwesịrị ịmalite iru ọkwa ahụ?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu obodo niile enweela GIS, nke a bụ mmalite, inwe ezigbo cadastre na usoro niile dị mkpa na Spatial Data Infrastructure (IDE) nke na-emekọrịta ihe n'etiti ngalaba dị iche iche na-ebikọ ọnụ n'obodo ebe ngalaba ọ bụla bụ Lacha. onye nwe ya bu oru maka idebe ya, nke a ga enyere aka nyocha, nhazi na njikọta ya na ụmụ amaala.
Ka anyị kwuo maka agụmakwụkwọ GIS Venezuela, ọ nabatara ya nke ọma? Kedu usoro nyocha nke agụmakwụkwọ na-enye?
Ee, anyi onwe anyi di na Esri Venezuela nwere nnukwu obi uto banyere nnabata anyi ISlọ ​​akwụkwọ GISAnyị nwere ọtụtụ ọmụmụ kwa izu, ọtụtụ ndị debanyere aha, anyị na-enye ndị nkuzi Esri niile, mana na mgbakwunye anyị mepụtara onyinye nke ahaziri iche na Geomarketing, Environment, Petroleum, Geodesign na Cadastre. Anyị mekwara ọpụrụiche n'otu mpaghara ahụ nwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Ugbu a anyị nwere usoro ọhụụ na ngwaahịa ArcGIS Urban nke kpamkpam n'asụsụ Spanish na Bekee mebere kpamkpam na Esri Venezuela na a na-eji ya azụ ndị ọzọ na-ekesa na Latin America. Ọnụahịa anyị na-akwado nke ọma.
You na-atụle na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ maka ọzụzụ nke onye ọrụ GIS na Venezuela bụ kwekọrọ na nke ugbu a?
Eeh, oke ihe anyi choro gosiputara, Emeputara ihe omumu anyi dika ihe a choro n'oge a na Venezuela, emeputara ndi puru iche dika mkpa oru nke mba a, ndi nile mejuputara ndi mmadu bu ndi ozo goro ozugbo ma obu nweta ọrụ ka mma.
Ì chere na ọchịchọ ndị ọkachamara nwere njikọ chiri anya na njikwa data gbasara mbara igwe ga-adị elu karịa n'ọdịnihu dị nso?
Ee, nke ahụ bụ eziokwu taa, ọdụ data na-abawanye ụbọchị ọ bụla ebe ọ mere ma ọ bụ ebe nke ahụ dị na nke ahụ na-enye anyị ohere ịdị na-arụ ọrụ nke ọma na ọgụgụ isi, a na-ekepụta ndị ọkachamara ọhụụ, ndị sayensị data (Science Science) na Ndị nyocha (Spatial Analyst) na Ekwenyesiri m ike na n'ọdịnihu, a ga-ekepụta ọtụtụ ozi ga-esite na mbido ya na ọtụtụ ndị ọkachamara ga-arụ ọrụ na ozi ahụ.
Kedu ihe ị chere banyere asọmpi na-aga n'ihu n'etiti teknụzụ GIS n'efu na nkeonwe.
Echere m na asọmpi ahụ dị mma n'ihi na nke ahụ na-eme ka anyị gbalịsie ike, melite ma nọgide na -emepụta ngwaahịa nke kachasị mma. Esri na-agbaso ụkpụrụ OGC niile, N'ime onyinye anyị na-enye, enwere ọtụtụ oghere na-emeghe na data emeghe
Kedu ihe ịma aka maka ọdịnihu n'ime ụwa GIS? Kedu mgbanwe kachasị dị ịrịba ama ị hụworo kemgbe ọ malitere?
Obi abụọ adịghị ya, enwere Ihe ịma aka anyị ga-anọgide na-azụlite, Ezigbo oge, ọgụgụ isi, 3D, Ihe oyiyi na Mmekọrịta n'etiti otu. Mgbanwe kachasị dị ịrịba ama nke m hụworo bụ mkpokọta ojiji nke usoro ArcGIS na ụlọ ọrụ niile, ebe ọ bụla, akụrụngwa na oge, anyị bụ sọftụwia nke maara etu esi eji naanị ndị ọrụ aka, taa enwere ngwa nke onye ọ bụla nwere ike ijikwa n'enweghị ụdị ọzụzụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ ọ bụla.
You chere na ọ ga-adịrịrị mfe ịnweta data ga-eme n'ọdịnihu n'ọdịnihu?
Ee, ekwenyesiri m ike na data ọdịnihu ga-emeghe ma dịrị mfe ịnweta. Nke ahụ ga - enyere aka ịbawanye data, mmelite yana mmekota n’etiti ndị mmadụ. Amamịghe echiche ga-enyere ọtụtụ aka iji mee ka usoro ndị a dị mfe, ọdịnihu nke data gbasara data ga-adị oke mma na enweghị mgbagha ọ bụla.
Can nwere ike ịgwa anyị gbasara ụfọdụ njikọ aka ga-adị n’afọ a na ndị ọhụrụ na-abịa.
Esri ga-aga n'ihu na-eto eto na obodo ya nke ndị mmekọ azụmaahịa yana mkpakọrịta na mahadum ga-enyere anyị aka ịmepụta obodo GIS siri ike, n'afọ a, anyị ga-esonyere ndị otu mba dị iche iche, ndị otu na-ahụ maka enyemaka enyemaka mmadụ na otu ndị nọ n'ihu ahịrị na-enyere aka imeri ọrịa na-efe efe COVID-19.
Ihe ọ bụla ọzọ m ga-achọ itinye
Na Esri Venezuela anyị nwere ọtụtụ afọ na atụmatụ iji nyere Mahadum aka, anyị na-akpọ ọrụ a Smart Campus nke anyị ji n'aka na anyị nwere ike idozi nsogbu ndị dị n'ime kampos ahụ yiri nsogbu nke obodo. Ihe oru ngo a enweela oru 4 mejuputara Central University nke Venezuela, Simón Bolívar University, Mahadum Zulia na Mahadum Metropolitan. Ulo akwukwo UCV, UCV 3D, Ogige Smart Smart
A gbara ajụjụ ọnụ a na ndị ọzọ bipụtara na Agba nke ise nke Twingeo Magazine. Twingeo zuru oke iji nweta isiokwu metụtara Geoengineering maka mbipụta ya na-esote, kpọtụrụ anyị site na ozi ịntanetị editor@geofumadas.com na edita@geoingenieria.com. Ruo mgbe mbipụta ọzọ.
Previous Post«Previous Robotik nwere mgbagwoju anya
Next Post UMUAKA UAV EXPO AMERICAASNext »
Ndụmọdụ imebe a na-arụ maka ya na Buildinglọ Ozi Model nke ezubere iji dozie ya. Daru, chepụta ma dowaa ...
Okwu Mmalite nke Remensing Course
Chọpụta ike nke ịmata ihe dị anya. Nwale, nwee mmetụta, nyocha ma hụ ihe ị nwere ike ime na -anọghị ebe ahụ. Ndị ...